TAR Mmezi Ngwá Ọrụ. TAR Iweghachite Software. TAR Idozi Ngwá Ọrụ.
DataNumen TAR Repair bụ kasị mma TAR ịrụzi na mgbake ngwá ọrụ na ụwa. Ọ nwere ike ịrụzi ihe rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi TAR edebe ihe ochie ma weghachite data gị dị ka o kwere mee, si otú ahụ na-ebelata ọnwụ na nrụrụ faịlụ.
4.90 / 5 (site na 1,454 votes)
Gịnị mere DataNumen TAR Repair?
Azụtara m sọftụwia gị ụnyaahụ iji weghachite 7GB tar faịlụ ahụ bụ ndekọ m niile "Akwụkwọ na Ntọala" site na laptọọpụ m nke na-abanye maka
Onye na-emepụta elektrọnik, onye ọrụ ugbo, ọkụ eletrik, onye egwu
Main Akụkụ na DataNumen TAR Repair v2.4
Nkwado idozi Unix ọkọlọtọ Tar faịlụ.
Nkwado iji weghachite Tar faịlụ dị na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi otu ogbe Tar faịlụ.
Nkwado idozi Tar faịlụ buru ibu dika 2TB (2048GB).
Nkwado ịchọta ma họrọ Tar faịlụ ndị a ga-arụzi na kọmputa ndị ahịa.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, yabụ ị nwere ike ịrụzi Tar faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
iji DataNumen TAR Repair iji weghachite mebiri emebi TAR Archives
mgbe gị TAR edebe ihe ochie ma ọ bụ mebie ma ị nweghị ike imeghe ya nke ọma, ịnwere ike iji ya DataNumen TAR Repair i scanomi ihe TAR Archive ma weghachite data ya dika o kwere mee.
Cheta na: Tupu na-agbake ọ bụla mebiri emebi ma ọ bụ rụrụ arụ TAR Archive na DataNumen TAR Repair, biko mechie ngwa ndị ọzọ nwere ike ịnweta TAR Archive.
Họrọ ndị mebiri emebi ma ọ bụ ndị rụrụ arụ TAR Archive-arụzi:
Nwere ike itinye ihe na TAR Archive aha ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ iji chọgharịa ma họrọ faịlụ nchekwa. I nwekwara ike pịa bọtịnụ chọta TAR Archive faịlụ a ga-arụzi na kọmputa mpaghara.
Site na ndabara, DataNumen TAR Repair ga-azọpụta ofu TAR faịlụ nchekwa na xxxx_fixed.tar, ebe xxxx bu aha isi mmalite TAR Archive. Dịka ọmụmaatụ, maka isi mmalite TAR Archive mebiri emebi.tar, ndabara echekwa Archive ga-Damaged_fixed.tar. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Nwere ike itinye aha faịlụ nchekwa na ofu aha ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ ofu Archive faịlụ.
pịa bọtịnụ, na DataNumen TAR Repair ga start na-enyocha ma na-arụzi isi iyi ahụ TAR Archive. Ogwe ọganihu
Mgbe mmezi usoro, ọ bụrụ na isi iyi TAR ị nwere ike idozi ebe nchekwa ihe nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe ofu TAR Archive na ngwa kwekọrọ.
DataNumen TAR Repair 2.4 weputara na Disemba 21th, 2020
DataNumen TAR Repair A na-ahapụ 2.2 na November 5th, 2020
DataNumen TAR Repair 2.1 weputara na March 8th, 2020
Nkwado iji weghachite tar faịlụ ndị 7-Zip.
DataNumen TAR Repair A tọhapụrụ 2.0 na November 16, 2013
DataNumen TAR Repair A tọhapụrụ 1.2 na June 5, 2005
Melite izi ezi na ọsọ nke mmeghachi omume.